Ogaden News Agency (ONA) – Muxaadaro Aad muhiim U Ah oo Dhagaxlay Lagu Qabtay.
Muxaadaro Aad muhiim U Ah oo Dhagaxlay Lagu Qabtay.
Maanta oo Jimce ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 22/4/16 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay muxaadaro aad muhiim u ah oo ay ka faa’iidaysteen dad aad ubadan oo kusugan xerada.
Muxaadaradan oo ahayd mid aad loosoo qorsheeyay waxaa qabanqaabadeeda iyo qabashadeedaba lahaa Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia UCSO fariciisa Dhagaxlay waxayna qabsoontay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Dhadhaab.
Munaasabada Muxaadarada ah waxaa furay gudoomiyaha laanta culimada ee dhagaxlay sh cali mukhtaar wuxuuna sheekhu sharaxaad kooban kusoo dhaweeyay Sheekh Shugri Caydiid oo kamid ah culimada waawayn ee S.ogadenia.
Sheekha oo kasoo socdaalay xerada dariska la ah Dhagaxlay ee Ifo wuxuuna sheekhu soo jeediyay muxaadaro uu ku farayaraystay diyaarinteeda oo uu kaga hadlayay samirka iyo isu gargaarida bulshada dhexdeeda ah.
Sheekh shugri caydiid ayaa furfurasho kadib isagoo aqoontiisa diineed kaashanaya wuxuu bulshada usharaxay samirka iyo adkaysiga wuxuuna sheekhu tusaaleyaal usoo qaadanayay Samirkii iyo dhaqankii Rasuilkeena Muxamad ah S.C.W iyo asxaabtiisii wuxuuna soo qaatay dhibkii lamariyay markay halganka deemeed kujireen.
Sidookale sheekha ayaa dadka S.ogadenia ee halganka u nasab sheegta kuguubaabiyay adkaysi iyo Samir iyagoo qaadaya wadadii Nabi Muxamad scw wuxuuna kula dardaarmay in ay u adkaystaan dilka, xabsiga, dhaca, hanjabaada, iyo qoxootiga.
Guntii iyo gunaanadkii kulankii maanta ayaa si farxad leh kusoo dhamaaday wuxuuna soo gaba gaboobay abaare 4:00 galabnimo.